ရွှေအကြောင်းသိကောင်းစရာ ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 8:14 PM | No မှတ်ချက် | Kyaw Naing WinFollow
ရွှေလုပ်တဲ့အယောက် ၁၀၀ မှာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်က ရွှေရောင်း ရွှေဝယ်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးနားမလည်ကြပါဘူး။ နားမလည်သည့်အတွက် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ရွှေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အခြေခံဗဟုသုတလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် . . . ရွှေဆိုသည်မှာ.......... - အခေါက်ရွှေ (သို့မဟုတ်) မီးလင်း - ၁၅ဲ ရည် (ဆယ့်ငါးပဲရည်) - ဒင်္ဂါးရည် (သို့) ၁၂ ရွေးစပ်
- ၁၄ဲ ရည် (ဆယ့်လေးပဲရည်) - ရွေးသုံးဆယ်စပ် - မိုးကြိုး
"ရွှေ" ကိုချိ်န်တွယ်ရာတွင် "ကျပ်သား" ပေါ် မူတည်စံပြု၍ ချိန်တွယ်သောကြောင့် ရွှေအချိန်အတွယ်တွင် "ကျပ်သား" ၊ "ပဲသား" ၊ "ရွေးသား" ဟူ၍ အဆင့်ဆင့် ပါရှိသည်။
တစ်ကျပ်သား = ၁၆ ပဲသား တစ်ကျပ်သား = ၁၂၈ ရွေးသား (ရန်ကုန်အချိန်) တစ်ကျပ်သား = ၁၂၀ ရွေးသား (မန္တလေးအချိန်) ၁-ပဲသား = ၈ ရွေးသား (ရန်ကုန်အချိန်) ၁-ပဲသား = ၇.၅ ရွေးသား (မန္တလေးအချိန်) ။
အောက်ပါတို့မှာ ရန်ကုန် အလေးချိန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ကျပ်သား = ၁၆ ပဲ = ရွေး ၁၂၈ ငါးမူးသား = ၈ဲ (ရှစ်ပဲ) = ရွေး ၆၄ တစ်မတ်သား = ၄ဲ = ရွေး ၃၂ တမူးသား = ၂ဲ = ရွေး ၁၆ တပဲသား = ရွေး ၈ ။
အောက်ပါတို့မှာ မန္တလေး အလေးချိန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ကျပ်သား = ၁၆ ပဲ =ရွေး ၁၂၀ ငါးမူးသား = ၈ဲ(ရှစ်ပဲ) = ရွေး ၆၀ တစ်မတ်သား = ၄ဲ = ရွေး ၃၀ တစ်မူးသား = ၂ဲ = ၁၅ ရွေး တစ်ပဲသား = ၇.၅ ရွေး ။
ရွှေ၏ အရည်အသွေးနှင့် အခေါ်ဝေါ်ဖြစ်ပေါ်ပုံ ...... မီးလင်း နှင့် အခေါက်သည် အတူတူ ခေါ်ဝေါ်ပုံသာကွဲသည် ရွှေဈေး အသုံးအနှုန်းကို အခေါက်ရွှေနှင့်သာ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သူများ အသုံးပြုပြောကြားကြသည်။ အခေါက်ရွှေဆိုသည်မှာ ၉၉.၉၉ ရာခိုင်နှုန်းဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။
၁၅ဲ ရည်ဆိုသည်မှာအခေါက်ရွှေ ၁၅ဲ သားနှင့် ကြေးနီ+ဘော် အချိုးကျ ၁ဲ(တစ်ပဲ) သားနှင့်ရောစပ်ပြီး တစ်ကျပ်သားပြုလုပ်ထားတာဖြစ်သည်။
ဒင်္ဂါးရည် (သို့) ၁၂ ရွေးစပ်ဆိုသည်မှာလည်း အခေါက်ရွှေ ၁၀၈ ရွေးကို ကြေးနီ+ဘော် ၁၂ ရွေးအချိုးကျ ရောစပ်ထားတာဖြစ်သည်။
၁၄ဲရည်(ဆယ့်လေးပဲရည်) ဆိုသည်မှာလဲ ထိုနည်း၎င်း အခေါက်ရွှေ ၁၄ဲ (ဆယ့်လေးပဲ)သားကို ကြေးနီနှင့် ဘော်အချိုးကျ ၂ဲသား(နှစ်ပဲသား) ရောစပ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။
ရွေးသုံးဆယ်စပ် ဆိုတာကတော့ အခေါက်ရွှေ သုံးမတ်သား ရွေး (သို့) ၁၂ဲ သားကို ကြေးနီနှင့် ဘော် အချိုးကျ ၁ မတ်သားရောစပ်၍ တစ်ကျပ်သား ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်သည်။
မိုးကြိုး- ဆိုသည်မှာတော့ အခေါက်ရွှေ တစ်မတ်သား (၄ဲ) ကို ကြေးနီ နှင့်ဘော် အချိုးကျ သုံးမတ်သား(၁၂ဲ)သားရောစပ် ၍တစ်ကျပ်သားဖြစ်အောင်ပြုလုပ် ထားတာဖြစ်တယ်။ (မလွန်လွန်းဖူးလားကွယ်)
အခေါက်ရွှေတစ်ကျပ်သား ဈေးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ သိရင် ကျန်တဲ့အရွှေအမျိုးအစားတွေ ရဲ့ဈေးဟာလဲ ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ဒီလို ဒီလို ဖော်မြူလာလေးတွေ ရှိတယ် . . . ။
မန္တလေအချိန်အတွယ်ဖြင့် တွက်ပြထားသော ဖော်မြူလာ ...... အခေါက်ရွှေဈေး x ၁၁၂.၅ / ၁၂၀ = ၁၅ဲရည်ဈေး အခေါက်ရွှေဈေး x ၁၀၈ / ၁၂၀ = ဒင်္ဂါးရည်ဈေး အခေါက်ရွှေဈေး x ၁၀၅ / ၁၂၀ = ၁၄ဲ ရည်ဈေး အခေါက်ရွှေဈေး x ၉၀ / ၁၂၀ = ရွေးသုံးဆယ်စပ်ဈေး အခေါက်ရွှေဈေး x ၃၀ / ၁၂၀ = မိုးကြိုးဈေး ။
ရန်ကုန်အချိန်အတွယ်ဖြင့် ပြန်လည်တွက်ပြထားသော ဖော်မြူလာ .... အခေါက်ရွှေဈေး x ၁၂၀ / ၁၂၈ = ၁၅ဲ ရည်ဈေး အခေါက်ရွှေဈေး x ၁၁၅.၂ / ၁၂၈ = ဒင်္ဂါး ရည်ဈေး အခေါက်ရွှေဈေး x ၁၁၂ / ၁၂၈ = ၁၄ဲ ရည်ဈေး အခေါက်ရွှေဈေး x ၉၆ / ၁၂၈ = ရွေးသုံးဆယ်စပ်ဈေး အခေါက်ရွှေဈေး x ၃၂ / ၁၂၈ = မိုးကြိုးဈေး ... ဖြစ်ပါသည် ။
အခေါက်ရွှေ ဟာပျော့တယ် ကြေးနီနှင့်ဘော် ပါဝင်နှုန်းများလာလေ ရွှေဟာအရည်ညံလေ မာလာလေဖြစ်ပါတယ်။ အခေါက်ရွှေကို မီးနဲ့ နီရဲးလာအောင် အပူပေး ရေထဲသို့ ချလျှင်သော်၎င်း ဒီအတိုင်းပဲ အအေးခံလျှင်သော်၎င် အ၀ါရောင်အတိုင်း မပြောင်းလဲပဲမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ရွှေထည်များဝယ်ယူ ၀တ်ဆင်ပြီးပါက ပြန်လည်ရောင်းချသောအခါ ဘောက်ချာပျောက်လျှင်သော်၎င်း မိမိဝယ်ယူသည့်ဆိုင်မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားဆိုင်သို့ရောင်လျှင်သော်၎င်း ဈေးအနှိမ်ခံရပါတယ်။
အဲ့ဒါက ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရွှေထည်တစ်ခု လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဂဟေဆော်ရတယ်။ အဲ့ဒီဂဟောဆော်ဖို့က အထည်လုပ်မည့်ရွှေ အမျိုးအစား ၂ ဆကို ကြေးနီနှင့်ဘော် ဆတူဝန်းကျင် ရောစပ်ထားတဲ့ စပ်ခဲ ၁ ဆနဲ့ရောရတယ်။ ရွှေထည်တစ်ကျပ်သားဆိုပါက စပ်ခဲ ၁ ရွေးမှစ၍ ၅ ရွေး ၆ ရွေးအထိဝင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ပဲဝန်းကျင်သာ အတင်ချိန်ရှိတဲ့ နားကပ် လက်စွပ် တစ်ခုခုပြုလုပ်ပါကလဲ စပ်ခဲ ၁ ရွေး ၂ ရွေးအထိဝင်ပါတယ်။ နားကပ်တစ်ရံဆိုပါစို့ ရွှေချိန်က ၁ဲ သားပဲရှိတယ် စပ်ခဲက ၂ ရွေးလောက်ဝင်နေတယ်။ ရွှေက ၅ ရွေးခွဲပဲကျန်တော့တယ်။ ဆိုင်ကကိုယ်ဝယ်ခဲ့တော့ ၁ဲ ဖိုးပေးခဲ့ရတယ်။ တစ်ကယ်တမ်း ရွှေပါတာက ၁ဲ မပြည့်ဘူး။ အလျှော့တွက်လက်ခက ၃ ရွေးလောက်ပေးရတယ်။ ကိုယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင် အတင်ချိန်+အလျှော့တွက်လက်ခ ၁၀.၅ ရွေးဖိုးပေးခဲ့ရတယ်။ တစ်ကယ်တမ်း အဲ့ဒီအထည်မှာ ပါတဲ့ရွှေက ၅ ရွေးခွဲးလောက်ပါတယ်။ ဒါကို မိမိဝယ်ယူတဲ့ဆိုင်မှာ ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် ပြဿနာမရှိဘူး ရွှေချိန် ၁ဲ ကိုလဲ ၁ဲ ဖိုးပြန်ပေးတယ်။
အလျှော့တွက်လက်ခ ၃ ရွေးယူထားတာကိုလဲ အထည်မပျက်စီးသေးဘူးဆိုရင် တစ်ဝက်ဖိုးပြန်ပေးတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မိမိဝယ်ယူတဲ့ဆိုင်ကို ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် အလျှော့တွက် တစ်ဝက်လောက်ပဲရှုံးတယ်။ အခြားဆိုင်မှာ သွားရောင်းမယ်ဆိုပါက သူတို့လုပ်ထားတဲ့ အထည်မဟုတ်တဲ့အတွက် လက်ရှိအထည်မှာပါတဲ့ ရွှေတန်ဖိုးကိုပဲ တွက်ဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေပါဝင်တာက ၅ ရွေးခွဲလောက်ပဲရှိမယ်ဆိုရင် သူတို့အတွက် အမြတ်က တစ်ခြမ်းလောက်ချန်လိုက်မယ်(တစ်ရွေး၏တစ်ဝက်) ရောင်းတဲ့လူမှာ ၅ ရွေးဖိုးပဲပြန်ရတော့မယ်။ ၀ယ်တုန်းက ဆယ်ရွေးနဲ့ တစ်ခြမ်းရှိတယ် ငါးရွေးခွဲးလောက် ရှုံးသွားမယ်။
ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်အနေဖြင့် မိမိရောင်းလိုက်သော အထည်မိမိဆီပြန်မလာလေ ကြိုတ်လေပဲ။ တစ်ချို့ရွှေဆိုင်တွေက ကျတော့လဲ ရွှေအရည်မပြည့်မှိဘူး ၁၅ဲ ရည်ဆိုရင် ၁၄ဲ ရည်လောက်ပဲရှိတယ်။ တစ်ကျပ်သားကို တစ်ပဲ ပိုစပ်ထားတဲ့အတွက် တစ်ပဲ ကို လေးသောင်း ငါးသောင်း ၀န်းကျင်မှာရှိတယ်။ တစ်ရက်ကို နှစ်ကျပ်သားရောင်းရရင် တစ်သိန်းလောက်က အလျှော့တွက် လက်ခ မပါသေးဘူး ပိုစပ်ထားတဲ့အတွက်နဲ့တင်မြတ်နေပြီ။
ပြန်လာရောင်းတော့ ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လဲ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ဟာ ကိုယ်ပြန်ပေးရတာ။ ကြားထဲမှာ ငွေသုံးရတာပေါ့။ ပြန်မလာတော့ဘူးဆိုရင် အမြတ်ကျန်နေလိုက်တာပေါ့။
၀ယ်တုန်းကဈေး နဲ့ ပြန်ရောင်းတဲ့ အချိန်ဈေးဟာလဲတော်တော်ကွာနေတယ်။ ဥပမာ ၀ယ်တုန်းက တစ်သိန်း ပေးထားရတယ်ဆိုရင် အခုတစ်သိန်းခွဲလောက် ရ ရမှာ။ ဒါပေမယ့် တစ်သိန်း သုံးသောင်းလောက်ပဲ ပေးတယ်။ ရောင်းတဲ့လူကလဲ နားမလည်တော့ သုံးသောင်းလောက်မြတ်တာနဲ့ ကျေနပ်နေတယ် အဲ့ဒါမျိုးတွေ လုပ်ကြတယ်။
ရွှေဆိုင်ကြီးတွေမှာ ရောင်းလိုက်ရတဲ့အထည် တစ်ဝက်လောက်က ဆိုင်ကိုပြန်လာတယ်။ တစ်ဝက်လောက်က ဆိုင်ကိုယ်ပြန်မလောတော့ဘူးလို့ ခန့်မှန်းခြေသိရပါတယ်။ ရွှေထည်များဝယ်ယူမည် ဆိုပါက ထိုကဲ့သို့ ရှိပါသည်။
တစ်ကယ်လို့ ပိုက်ဆံပျောက်ပျက်သွားမှာစိုးလို့ ရွှေဝယ်ထားချင်တယ်ဆိုရင် အခဲလိုက်ဝယ်ထားတာ အဆင်အပြေဆုံးပါ။ တစ်ကျပ်သားကို ရောင်းဈေးနဲ့ ၀ယ်ဈေး ၁၅၀၀ ပဲခွါတယ်။ ဒါကလဲ ခေါက်ရွှေ သီးသန့်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေ ဈေးမှန်တဲ့ ဆိုင်တွေမှပါ။
တစ်ချို့ရွှေဆိုင်များစို ၀ယ်တဲ့အခါမှာ လက်ရှိပေါက်ဈေးထက် တစ်သောင်းလောက်ပိုရောင်းတယ် ပြန်ဝယ်တဲ့အချိန်ကျတော့ တစ်သောင်းလောက် လျော့ပေးပြန်ရော ၀ယ်တော့တစ်သောင်းနာ ရောင်းတော့တစ်သောင်းနာ။ ရွာသူ ရွာသားအပေါင်းကို ဗဟုသုတဖြစ်စေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။ အမှားများ မပြည့်စုံသည်များ တွေ့ရှိရပါက ပြန်လည် ဖြည့်စွပ်ပေးကြပါရန် . . . . . ။ ။
ရွှေတန်ဖိုး တွက်ချက်နည်း ............
မြန်မာနိုင်ငံသုံး ရွှေချိန်တွယ်စနစ်ဖြစ်သည့် ကျပ်၊ ပဲ၊ ရွေး ဖြင့် ရွှေတန်ဖိုးကို တွက်ကြည့်ကြရအောင် . . .။
ရန်ကုန်အလေးချိန်စနစ်ဖြင့် တွက်သည် ..... အဆင့်(၁)။ ။ ရွှေအလေးချိန် "ကျပ်၊ ပဲ၊ ရွေး" ကို "ကျပ်သား" သို့ ဖွဲ့ယူပါ။ အဆင့်(၂)။ ။ ရရှိသော "ကျပ်သား" ကို ရွှေတစ်ကျပ်သား ဈေးနှုန်းဖြင့် မြှောက်ပါက ရွှေအလေးချိန်အတွက် ကျသင့်တန်ဖိုးကို ရရှိပါမည်။
Formula: ရွေး / 128 + ပဲ / 16 + ကျပ် x ရွှေ ၁ ကျပ်သား တန်ဖိုး = ရွှေအလေးချိန်၏ ကျသင့်ငွေပေါင်း
ရွှေ ၁ ကျပ်သားလျှင် 650,000 ဈေးနှုန်းဖြင့် ရွှေချိန် ၁ ကျပ်သား၊ ၃ ပဲ၊ ၅ ရွေးအတွက် သင့်ငွေပေါင်းကို ရှာမယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်ဘောက်ချာမှ ရွှေတန်ဖိုးတွက်နည်း ။5/ 128 +3/ 16 + 1 x 650.000 = 797265.625 ဒါကြောင့် ၁ ကျပ်သား၊ ၃ ပဲ၊ ၅ ရွေး ကို 797265.625 ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် .. ရန်ကုန်ဘောက်ချာကို ရန်ကုန်ရွေးနဲ့တွက်ပြီး မန္တလေးဘောက်ချာကို မန္တလေးရွေးနဲ့ပဲတွက်ရပါမယ် ။ ဥပမာ ; မန္တလေးရွေးစနစ် ၁၂၀ ထားပြီးတော့ ...5/ 120 +3/ 16 x 650.000 ဆိုပြီးတွက်ရင် တန်ဖိုးမတူတာထွက်လာပါ့မယ် ။ အဲ့ဒါကြောင့် ရန်ကုန်ဘောက်ချာကို မန္တလေးလိုတွက်လျှင် (5x 120 / 128 ) ÷ 120 +3/ 16 + 1 x 650.000 = 797265.625 ။ ဆိုပြီးတွက်ရပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက ရန်ကုန်ရွေးကို မန္တလေးရွေးဖြစ်အောင် ပြောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။
မန္တလေးဘောက်ချာမှ ရွှေတန်ဖိုးတွက်နည်း ... ရွေး / 120 + ပဲ / 16 ကျပ် x ရွှေ ၁ ကျပ်သား တန်ဖိုး = ရွှေအလေးချိန်ကျသင့်ငွေပေါင်း။
Myanmar ပိဿာ Viss vs Kilogram/gram
Table of mass units Myanmar Matric Imperial/US
ရွဲလေး yway lay = 136.078 mg = 2.1 grain ရွဲကြီး yway gyi = 272.155 mg = 4.2 grain ပဲသား petha = 1.02058 g = 15.75 grain မူးသား mutha = 2.04117 g = 31.5 grain မတ်သား mattha = 4.08233 g = 63 grain ငါးမူးသား nga mutha = 8.16466 g = 0.288 oz ကျပ်သား kyattha = 16.3293 g = 0.576 oz အဝက်သား awettha = 204.117 g = 7.2 oz အစိတ်သား aseittha = 408.233 g = 14.4 oz ငါးဆယ်သား ngase tha = 816.466 g = 1.8 lb ပိဿာ peittha = 1.63293 kg = 3.6 lb အချိန်တစ်ရာ achein taya = 163.293 kg = 360 lb
"five mutha", but in fact it is only four. ဟု ဝီကီပီးဒီးယားတွင်း ပြထားသည်၊ သို့သော် ငါးမူးသားဆိုသည်မှာ ငွေတစ်ကျပ်၏တဝက် ပြားငါဆယ်ကို မြန်မာက ငါးမူဟုခေါ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါသည် ။
Traditionally known ကျပ်သား asatical in English. Traditionally known ပိဿာ asaviss in English.
credit to all webs. U Naing Win - facebook